Ihe omuma di iche iche na ebe nchekwa na aru oru n’ime umuaka dyslexic - Training Cognitive
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » Ọrụ ndị isi » Awarenessmata ihe banyere oku na ebe nchekwa n’oru n’ulo umuaka
Gịnị bụ ịma ụda olu
La omuma nke onyonyo ọ bụ ikike ịtụgharị uche na ịgbanwe ụzọ olu okwu dị. A na-ahụta ka ọ bụrụ otu n’ime ndị buru amụma banyere ike ọgụgụ ihe ma kwenyere na njikọ a ga-abịaru nso n ’asụsụ nwere mkpụrụokwu opaque.
Nnyocha nke Knopp-van Campen na ndị ọrụ ibe  na-ewega ntụgharị uche dị ka nke ọ dị mmekọrịta dị n’etiti ebe nchekwa a ga na-agụkwa ọgụgụ banyere ihe ndị mmadụ na-ekwu: ụkọ ebe nchekwa ga - eme ka ihe isi ike na - arụ ọrụ ọgụgụ isi na - arụ ọrụ nke a ga - eme ka ọgụgụ ihe na - adịchaghị mma na cascade.
Agbanyeghị, a na-ekwenye na ịmara ụda olu dị mkpa n'afọ ndị mbụ agụmakwụkwọ, mana nke ahụ mechara nweta "mmetụta ụlọ" (ngwa ngwa na normolectors, nwayọ nwayọ, mana ọ ka nọ na ngwụcha ụlọ akwụkwọ praịmarị, na nyocha). Ma nke a ọ̀ bụ eziokwu?
Ebumnuche nke ọmụmụ:
Nyochaa mmekọrịta dị n'etiti nghọta ụda na ịgụ okwu na ngwụsị ụlọ akwụkwọ praịmarị
Ghọta ma ọ bụrụ na ebe nchekwa na-arụ ọrụ si emetụta ịgụ okwu
Iji zaa ajụjụ nke mbụ, e nyere ụmụaka ụmụaka dị iri isii na isii, narị isii na iri isii na isii nke nnụnụ ụda ọkụ na ịgụ. Iji zaa nke abụọ, obere ụmụaka 663 nwere ọrịa dyslexia mere nyocha ndị ọzọ na-arụ ọrụ na ebe nchekwa.
Ebe nchekwa ọrụ: tụgharịa mkpụrụ ego azụ
Ihe omuma banyere ihe ndi ozo di iche iche
Ọgụgụ: nwale nkeji atọ (kaadị atọ nwere okwu siri ike nghọta, ebumnuche bụ ịgụ ọnụọgụgụ kachasị na otu nkeji n'otu kaadi)
Nsonaazụ gọnarịrị hypothesis mbụ: ọbụlagodi na ụmụaka toro eto, omuma ihe a na-ekwu okwu yiri ka o si abia na igu akwukwo ya na ma ndi a na-ahuta ma ndi a na-eme anwansi. Ihe omumu ihe omumu emere n’oge gara aga bu ndi n’eme ka ule di omimi nke choro imeghari ikike ikwu okwu n’enyeghi umuaka.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Gịnị bụ ọrụ isi ike?
Banyere isi nke abụọ, na ụmụaka dyslexic ebe nchekwa na-arụ ọrụ yiri ka ọ na-enwe mmetụta na-apụtaghị ìhè na arụmọrụ nke ọgụgụ site na ngụgụ nke nghọta ụda. Karịsịa, na ụmụaka dyslexic bụ ndị na-enweghị ike ịbanye na akpaaka, ma yabụ na-aga n’ihu ịrụ ọrụ ngbanwe ọbụlagodi n'okwu ndị ama ama, ana echetakarị ebe nchekwa ọrụ mgbe niile.
Dịka anyị siri kọwapụta n’isiokwu ndị ọzọ, ebe nchekwa na-arụ ọrụ (ọkachasị nke ọma) bụ otu n’ime ihe na-emetụta ọtụtụ agụ, n’obodo n’agadi.
Mgbe mgbe, ana-eche na ule nke ike a na-ekwu okwu ike, ọbụlagodi na oge na-egbu oge, ga-ejupụtakwa na ụmụaka nwere nsogbu mmụta.
N'ime ihe ọmụmụ a, na ntụle, egosiri etu esi ahọrọ ụdị ihe mgbagwoju anya ga - enyere aka ịchọpụta ọdịiche dị ukwuu na arụmọrụ ọbụladị na njedebe ụlọ akwụkwọ praịmarị. Mmachi nke ihe omumu a, n'ihe gbasara abuo bu n'agaghị nyocha mmekọrịta dị n'etiti ebe nchekwa na-arụ ọrụ, ịmara ụda olu na ịgụ ihe na ndị na - achịkwa, ebe ọ bụ na ịghọta usoro usoro agụ ihe ji enyere anyị aka ịmatakwu ụdị ihe isi ike ndị ahụ.
N'ụgụ GameCenter, ị ga-ahụ ọtụtụ ọrụ mmemme efu na-emetụta ihe ọgụgụ
Gịnị bụ ebe nchekwa
Difficultiesrụ ọrụ nchekwa ihe (ma ọbụghị naanị). Ihe ị ga-eme n’ụlọ akwụkwọ
Ghọta ihe ederede karịrị ọsọ ọsọ: ikike ncheta okwu na-arụ ọrụ
 Knoop-van Campen CAN, Segers E, Verhoeven L. Kedụ ka ụda igwe si eme ka mmekọrịta dị n'etiti ebe nchekwa na arụmọrụ ọgụgụ okwu na ụmụaka nwere dyslexia. Dyslexia. 2018;24(2):156-169.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Ghọta ihe ederede karịrị ọsọ ọsọ: ikike ncheta okwu na-arụ ọrụ
omuma nke onyonyo, dyslexia, ọgụgụ, ebe nchekwa
Awarenessmata ihe banyere oku na ebe nchekwa n’oru n’ulo umuaka2020-08-032020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/08/board-1666644_960_720.jpg200px200px
Ọmụmụ arụmọrụ mgbe ọrịa strok na-eto etommụta